DVR Car Black Box | Myanmar Free Ads ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Camera / Security / DVR Car Black Box
Maung Pauk 12:00 PM Camera , Security
ကိုယ္ပိုင္ကားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အငွားကားပဲျဖစ္ျဖစ္ .. ကားတိုင္းမွာ Black Box ေလးတစ္ခုေတာ့ တပ္သင့္တဲ့ေခတ္ကိုေရာက္လာၿပီ.. ကားေတြက ေပါ၊ ဆိုင္ကယ္ေတြက မ်ား၊ စည္းကမ္းမရွိသူေတြက လမ္းေပၚမွာ ဒုနဲ႔ေဒး.. ကိုယ္ကမွန္ေပမယ့္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ၿပီဆို ရွင္းရလင္းရတာ မလြယ္ပါဘူး.. ဒီၾကားထဲ ကားတိုက္ခံရသေယာင္ေယာင္ လုပ္စားေနတဲ့သူေတြကလည္း မ်ားလိုက္တာ... ကိုယ့္ဘက္က မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔အတြက္ Black Box Recorder က အေကာင္းဆံုးသက္ေသပါ.. သူမွားသလား၊ ကိုယ္မွားသလား ဆိုတာ Video File က သက္ေသျပေနပါတယ္..
ဒီ Car Black Box အေၾကာင္း နည္းနည္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ -
✔ Day/Night Visionျဖင့္ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာအသံုးျပဳႏိုင္တယ္..
✔ Lensns မွာ Fixed 120° degrees lens အသံုးျပဳထားၿပီး
✔ ႐ုပ္ထြက္ေကာင္းသလို အသံဖမ္းယူနိုင္မႈ ဆြဲအားလည္း ေကာင္းပါတယ္..။
✔ Memory 4GBမွ 32GB အထိ Micro card ထည့္စိုက္သံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္..
ကားစီးကရက္လိုက္တာေပါက္မွာ ပါဝါေကြၽးၿပီး ကားမွန္မွာ အသင့္ပါေသာ စုပ္ခြက္နဲ႔ ကပ္လိုက္ရံုပါပဲ။ ကားေသာ့ဖြင့္တာနဲ႔ ဘာခလုတ္မွ နွိပ္စရာမလိုပဲ မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယိုရိုက္ ေနပါလိမ့္မယ္။
2.5"လက္မအက်ယ္ မွန္ျပင္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈ နိုင္သလို Memory card ကို ထုတ္ၿပီး ဟန္းဖုန္းနဲ႔လည္း ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ဟန္းဆက္မ်က္နွာျပင္က်ယ္ရင္ ပိုၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ျမင္ရပါတယ္။
DATE ရက္၊ လ၊ နွစ္၊ နာရီ၊ မိနစ္၊ စကၠန္႔ပါ ေအာက္မွာ စာတန္းထိုးနဲ႔ ျပေပးထားလို႔ သက္ေသသာဓက တင္ျပတဲ့အခါ ပိုမိုခိုင္လံု ေစပါတယ္။
၅။ အသံုးျပဳနည္းစာအုပ္ (အဂၤလိပ္၊ တရုတ္)
Video Format မွာ VGA 640X480 ျဖင့္ ရိုက္ကူးနိုင္ၿပီး White balance ကို Auto. Daylight. Cloudy. Tungsten. Fluorescent ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါေသးတယ္...
[ကိုယ်ပိုင်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အငှားကားပဲဖြစ်ဖြစ် .. ကားတိုင်းမှာ Black Box လေးတစ်ခုတော့ တပ်သင့်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြီ.. ကားတွေက ပေါ၊ ဆိုင်ကယ်တွေက များ၊ စည်းကမ်းမရှိသူတွေက လမ်းပေါ်မှာ ဒုနဲ့ဒေး.. ကိုယ်ကမှန်ပေမယ့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီဆို ရှင်းရလင်းရတာ မလွယ်ပါဘူး.. ဒီကြားထဲ ကားတိုက်ခံရသယောင်ယောင် လုပ်စားနေတဲ့သူတွေကလည်း များလိုက်တာ... ကိုယ့်ဘက်က မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြဖို့အတွက် Black Box Recorder က အကောင်းဆုံးသက်သေပါ.. သူမှားသလား၊ ကိုယ်မှားသလား ဆိုတာ Video File က သက်သေပြနေပါတယ်..
ဒီတော့ Car Black Box က စျေးကြီးသလား.. ဟုတ်ကဲ့.. စျေးကြီးတာတွေလည်း အများကြီးပါ.. စျေးကြီးတာတွေ ဝယ်မတပ်သေးဘူး၊ တပ်ဆင်ရတာလည်း လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ချင်တယ်၊ အရည်အသွေးကလည်း အညံ့ကြီးထဲက မဟုတ်တာ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာငွေ ကျပ် ၂၀၀၀၀ တည်းနဲ့ Car Black Box လေးတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်...
ဒီ Car Black Box အကြောင်း နည်းနည်း ပြောရမယ်ဆိုရင် -
✔ Day/Night Visionဖြင့်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်..
✔ Lensns မှာ Fixed 120° degrees lens အသုံးပြုထားပြီး
✔ ရုပ်ထွက်ကောင်းသလို အသံဖမ်းယူနိုင်မှု ဆွဲအားလည်း ကောင်းပါတယ်..။
✔ Memory 4GBမှ 32GB အထိ Micro card ထည့်စိုက်သုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
ကားစီးကရက်လိုက်တာပေါက်မှာ ပါဝါကျွေးပြီး ကားမှန်မှာ အသင့်ပါသော စုပ်ခွက်နဲ့ ကပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ကားသော့ဖွင့်တာနဲ့ ဘာခလုတ်မှ နှိပ်စရာမလိုပဲ မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုရိုက် နေပါလိမ့်မယ်။
2.5"လက်မအကျယ် မှန်ပြင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု နိုင်သလို Memory card ကို ထုတ်ပြီး ဟန်းဖုန်းနဲ့လည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဟန်းဆက်မျက်နှာပြင်ကျယ်ရင် ပိုပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်ရပါတယ်။
DATE ရက်၊ လ၊ နှစ်၊ နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့်ပါ အောက်မှာ စာတန်းထိုးနဲ့ ပြပေးထားလို့ သက်သေသာဓက တင်ပြတဲ့အခါ ပိုမိုခိုင်လုံ စေပါတယ်။
၅။ အသုံးပြုနည်းစာအုပ် (အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်)
Video Format မှာ VGA 640X480 ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး White balance ကို Auto. Daylight. Cloudy. Tungsten. Fluorescent ဆိုပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်...
စျေးနှုန်းက 20000 ကျပ် ပဲကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး 365 Online Shop.. 09451689031, 09420388377, 09787179972 ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်...]